मुटुरोगबाट ज्यान गुमाउने प्रमुख कारण अज्ञानता- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
बढ्दो महत्वकांक्षा, कम क्रियाशील जीवन, स्वास्थ्य सम्बन्धि न्यूनतम ज्ञानको कमी तथा चिन्तालाई समयमा ब्यवस्थित गर्न नसक्नु जस्ता मुख्य कारणले संसारमा मुटुरोगबाट मानिसहरु पीडित हुने क्रम बढ्दो छ । बेलायतको कुरा गर्ने हो भने कोरोनरीमुटुरोग र स्ट्रोक सबैभन्दा धेरै मानिसमर्ने रोग हुन् ।
नेपालीको हकमा मुटुरोगबाट पीडित हुने जोखिम कस्तोछ ?
कोलेस्ट्रोलकाबारेमा मानिसमा अलि जानकारी कमीभएजस्तो देखिन्छ । साधारण मानिसले यसबारेबुझ्नुपर्ने कुरा के के छन्?
कोलेस्ट्रोल हाम्रो शरीरमा पाइने एक किसिमको बोसो हो । रगतमा धेरै चिल्लो भयो भने यो आर्टरीहरुमा जम्मा भइरक्त सञ्चार हुन व्यवधान गर्न सक्छ । हामीले खाने खानामा तयारी कोलेस्ट्रोल करिब २० प्रतिशत रहन्छ भने बांकी ८० प्रतिशत शरीरले बनाउंछ। कलेजोले हरेक दिन शरीरलाई पूरै पुग्ने करिब एक ग्राम कोलेस्ट्रोल बनाउंछ। तर हाम्रो शरीरको कोलेस्ट्रोलको परिमाणमा परिवर्तन हुन नसक्ने वंशाणुगत प्रभाव पनि पर्छ ।
एलडिएलले कोलेस्ट्रोल कोरोनरी आर्टरीको भित्ताहरुमा जम्मा गर्ने गर्छ र बोसो जम्मा भई मुटु रोग लाग्ने जोखिम बढाउंछ। यसको विपरित एचडीएलले कोलेस्ट्रोलआर्टरीहरुको भित्ताबाट र अझ तन्तुहरु पनि जम्मा पार्छ र कलेजोमा लगी प्रोसेस गरेर शरीरबाट निकाल्छ। त्यसैले एलडीएललाई ‘नराम्रो’ कोलेस्ट्रोल र एचडीएललाई ‘राम्रो’ कोलेस्ट्रोल भनिन्छ।
हामीले खाने मासु, दुध, घीउ, चीज आदिबाट प्राप्त हुने कोलेस्ट्रोल शरीरलाई आवश्यक पर्दैन तर शुद्ध शाकाहारी खानाबाट अतिरिक्त कोलेस्ट्रोल प्राप्त हुन्छ। कसैले धेरै परिमाणमा खाना खाए पनि उनीहरुमा रगतको तह साधारण रहन्छ। कोही मानिस धेरै कम खान्छन् तर रगत उच्च कोलेस्ट्रोल हुन्छ । यसको कारण जीवनशैली, वंशाणुगत, लिंग र शरीरले कोलेस्ट्रोललाई कसरी प्रोसेस गर्ने भन्नेप्रक्रियामा भर पर्छ ।
ठिक समयमा अस्पताल पुगे ह्दयाघातबाट बच्ने सम्भावना अधिक रहन्छ । छाती दुखेको अथवा माथि बताइएको ह्दयाघातका लक्षणहरु भए तुरुन्त अस्पताल पुग्नुपर्छ ।शंकामा त्यसै बस्नु हुंदैन । समय महत्वपूर्ण हुनसक्छ । तरपनि अझै कयौं मानिस अज्ञानताका कारण मुटुरोगबाट ज्यानै गुमाउने या पीडित हुने क्रम जारी छ ।
बैज्ञानिकहरुले पहिलोचोटि खराब डीएनएबाट भ्रूणहरु(एम्ब्रियो) सफलतापूर्वक अलग गरेका छन् जुन भ्रूणले वंशाणुगत रुपमा रगतको नाता भएको व्यक्तिमा सरि खतरनाक मुटुरोगको कारक बन्दछ । यसले पुस्तौं देखि सर्ने करिब दश हजार डिएनएको विकृतिहरुलाई रोकथाम गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । यस्तो आविस्कारको विकासले बंशानुगत रुपबाट सर्ने रोगहरु साइटिक फाइब्रोसिस देखि स्तन क्यान्सरको कारक हुने खराब डीएनएलाई हटाउन सक्नेछ ।
प्रकाशित : आश्विन ११, २०७४ १७:२७
नवलपरासीमा दुर्घटना, २ को मृत्यु
नवलपरासी — नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाको थकाली चोक नजिकै मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ युवाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कावासोतीका अनुसार ५ बजे भएको दुर्घटनामा कावासोतीका दीपेश मगर र बिनयीत्रिवेणी गाउँपालिका निवासी हेमन्त थापा मगरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
कवासोतीका जयराम चापागाई घाइते भएका छन् । थकालीचोकदेखि २ सय मिटर तल महेन्द्रराजमार्ग तर्फ आउँदै गरेको भारतीय ट्रकमा लु ८ प ८३३७ नम्बरको पोल्सर मोटरसाइकल ठोक्किदा २ युवाको घटनास्थलमै मत्यु भएको हो ।